Disemba 22 Zodiac - roscodị Horoscope zuru ezu - Akara Zodiac
Isi Akara Zodiac Disemba 22 Zodiac bụ Capricorn - roscodị Horoscope zuru ezu
Disemba 22 Zodiac bụ Capricorn - roscodị Horoscope zuru ezu
Akara zodiac maka Disemba 22 bụ Capricorn.
Akara Astrological: Ewu. Nke a bụ akara nke Capricorn zodiac maka ndị a mụrụ na Disemba 22 - Jenụwarị 19. Ọ na-anọchi anya isi ike mana ọ na-arụsi ọrụ ike na ebumnuche gụnyere omume obi ike na mkpali.
Ihe Capricornus kpakpando bụ otu n’ime kpakpando iri na abụọ nke zodiac, nke kpakpando kacha egbuke egbuke bụ Delta Delta Capricorni. Ọ dị n'etiti Sagittarius na West na Aquarius na East, na-ekpuchi mpaghara nke naanị 414 square degrees n'etiti latitude ndị a na-ahụ anya nke + 60 Celsius na -90 Celsius.
Aha Capricorn bụ nkọwa Latin maka Ewu, akara zodiac nke December 22. Ndị Greek kpọrọ ya Aegokeros ebe ndị Spen na-ekwu na ọ bụ Capricornio.
Ihe mgbaàmà na-emegide: Ọrịa cancer. Nke a pụtara na ihe ịrịba ama a na akara akara anyanwụ nke Capricorn nọ na mmekorita na-arụkọ ọrụ, na-egosi na ọ bara uru ma nwee obi ike na ihe onye ọzọ nwere na ụzọ ọzọ.
Usoro: Cardinal. Nke a na-ekpughe ihe ọchị na ịhụnanya yana otu ụmụ amaala amụrụ na December 22 si bụrụ eziokwu.
Ulinglọ ụlọ: Lọ nke iri . Thislọ a na-achịkwa nna na nwa agbọghọ ma na-egosipụta oke nwoke mara mma kamakwa ọgụ nke onye ọ bụla na-ahọrọ ụzọ ndụ. Nke a bụ aro maka ọdịmma nke Capricorns yana maka omume ha na ndụ.
Isi na-achị: Saturn . E kwuru na ahụ nke eluigwe a na-emetụta mmezu na ntụgharị uche. Ọ dịkwa mkpa site n'echiche mbanye. Saturn kwekọrọ na Cronus, chi nke ọrụ ugbo na akụkọ ifo ndị Gris.
Mmewere: Earthwa . Ihe a na-egosi na ndụ biri na uche niile. A na-ewere ya ka ndị amụrụ na Disemba 22 ruo ụwa ma nwee nsọpụrụ. Alsowa na-enwetakwa nkọwa ọhụrụ na njikọta na ihe ndị ọzọ, na -emepụta ihe na mmiri na ọkụ ma jikọtara ikuku.
Bọchị obi ụtọ: Satọde . Nke a bụ ụbọchị Saturn na-achị, ya mere metụtara mmemme na mmegharị. Ọ na-egosi ọdịdị bara uru nke ụmụ amaala Capricorn.
Nọmba na-atọ ụtọ: 3, 6, 11, 14, 25.
Motto: 'M na-eji!'
Ozi ndi ozo na Disemba 22 Zodiac n'okpuru ▼
Leo Sun Capricorn Ọnwa: Ddị kpebisiri ike
Nwanyị Aries: Keykpụrụ Omume Na Lovehụnanya, Ọrụ na Ndụ
esi rata nwoke sagittarius
akara zodiac maka Jenụwarị 1st
akara zodiac maka october 28th
Kedu ihe bụ akara zodiac maka Nọvemba 8
akara kacha mma maka nwanyị aries ịlụ